RASMI: Zidane Oo Soo Saaray Liiska Xidigaha Uu Uga Hortagayo Caawa Girona Kulan Ka Tirsan La Liga %
Tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid, ninka lagu magacaabo Zidane ayaa wuxuu ku dhawaaqay Liiska 18-ka ciyaaryahan ee kooxdiisa ku metalaysa ciyaarta ay caawa la balansan yihiin dhigooda Girona, oo ka tirsan horyaalka La Liga ee wadanka Spain.
Kulanka labadaan kooxood oo ah kii 29-aad ee sanad ciyaareedkan laga dheelayo La Liga, ayaa waxaa loo madalsan yahay in lagu dheelo garoonka caanka ah ee Santiago Bernabéu Stadium, kaasoo ay ku dheesho Boqorada Spain, ee Los Blancos.
Ciyaartaan oo hadii uu ALLE raali ka noqdo natiijadeeda iyo wax walba oo aad uga baahan tahay aad kala socon doonto Shabakada wararka cayaaraha ee Laacib.so ayaa waxaa laga daawan doonaa Geeska ama guud ahaan qaarada Afrika 10:45 oo caweysnimo.
Zidane ayaa wuxuuu kulankaan usoo xushay inuu uga har-tago Girona oo la xasuusto inay guul daro xanuun badan ay u saarisay kulankii koowaad ee fasal ciyaareedkan, ciyaaryahano waa weyn, isagoona umuuqda mid diyaar u ah inuu guusha helo.
Ma jiro, wax ciyaaryahan oo Real Madrid muhiim ah, kaasoo kulankaan dhaawac ama ganaax ku seegaya, laakiin waxaa jira ciyaaryahano laga soo tegay, sababo ku aadan in liiska ciyaartoyda loo baahan yahay inay ka badan yihiin.
Ciyaartoyda liiska kasoo dhex-muuqday ayaa waxaa kamid ah, Cristiano Ronaldo oo ah hogaamiyaha Los Blancos, Karim Banzema, Gareth Bale, Sergio Ramos, Toni Kroos iyo magacyo kale, oo badan, kuwaasoo muhiim u ah Madrid.
La LigaReal Madrid v Girona